Ogaden News Agency (ONA) – Wafdigii Kormeerka ee Jaaliyadda Koonfur Afrika (JOKA) oo Meela Kala Duwan Ka Wada Hawlahoodii
Wafdigii Kormeerka ee Jaaliyadda Koonfur Afrika (JOKA) oo Meela Kala Duwan Ka Wada Hawlahoodii
Posted by ONA Admin	/ October 22, 2014
Waftidii Jaaliyada Ogaadeeniya Ee kormeerka ku joogtayGobolkaEasterCapeayaa maal mahan danbe shir heerar kala duwan ah uga socdeen magaalaEast London.
Wafdigan kormeerka hawleed ku socda ayaa ugu danbayntii shir maalin badhkeed qaatay waxay layeesheen maamulka faraca iyagoo isla meel dhigay sidii farucu u dhamaystiri lahaa hawlaha hadhay ee kamid ahaa qorshe hawleedka jaaliyada ee kasoofulay xarunta dhexe ee JOKA.
Waxaana shirkaa khadka teleefoonka kaga qaybqaatay gudoomiyaha jaaliya Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika mudane Maxamed Daahir isagoo dar daaran u jeediyay maamulka faraca.
Wafitagan ayaa u kicitimay hadda dhanka magaala Uitenhage iyagoo si nabad ah ku gaadhey faraca goobtaas oo siwayn looga sugayay waxayna goobtaas ka bilaabi doonaana abaabul bulshada noocyadeeda kala duwan ah.
Waxaa sidoo kalle magaala Cape Town kusugan gudoomiyaha jaaliyadda mudane Maxamed Daahir iyo hogaanka maaliyada mudane Faysal oo gobolka Western Cape kawada hawlo abaabul ayaa goobahaas kula kulmay bulshada noocyadeeda kala duwan.
Jaaliyada Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika ayaa ku jirta abaabul balaadhan oo ladoonayo in bulshada lagu wacyi galiyo.